Barcelona oo markale Cautinho usoo geed fariisanaysa bisha Jannaayo – Gool FM
Barcelona oo markale Cautinho usoo geed fariisanaysa bisha Jannaayo
Raage October 4, 2017
(Barcelona) 04 Okt 2017 – Laacibka kooxda Liverpool ee Philippe Coutinho ayaa mar kale lala xiriirinayaa kooxda Barcelona narka la gaaro bisha Jannaayo sida ay qorayaan warbaahinta maxalliga ah ee gobolka Catalonia.
El Mundo Deportivo ayaa qoraya in Barcelona ay isha ku hayso laacibkan oo lagu qiyaaso €80m (£71m) iyo €30m (£26.6m) oo bareemiyo ah si ay Brazilian-kan u helaan bisha Jannaayo.
Jurgen Klopp ayaa ku guulaystey inuu laacibkan xafito xagaagii waloow ay isku day wayn sameeynaysay kooxda reer Catalan balse camaaliqadani uma muuqato mid ka ka hartay, waxaana taa kasii daran laacibka oo codsanaya in la fasoxo.
Waxaa jira dabar adag oo ka dhexeeya laacibka iyo saaxiibkii ay isku kooxda ahaayeen ee Luis Suarez, iyo sidoo kale laacibka ay isku dalka yihiin ee Paulinho.
Halka cillad oo laacibkan ka qabsan karta haddii ay Blaugrana qaadato bisha Jannaayo waa inuu ka qoob xiran yahay Champions League.
Taageerayaasha daawada kulamada ay AC Milan San Siro ku ciyaarto oo ku dhowaad laba jibaarmey
Xiddigaha ugu ordka dheereeya Premier League ilaa iminka oo la soo saaray